आफ्नो स्वाद तन्तु मनपर्छ एउटा साहसिक मा जानुहोस् र युरोप मा सबै भन्दा राम्रो खाना पर्यटन भाग. तपाईं एउटा उत्सुक foodie हुनुहुन्छ भने, तपाईंको तालु, साथै आफ्नो इन्स्टाग्राम फिड तपाईं अनुभव हुनेछ के संग आनन्द संग हाम फाल्न हुनेछ. को पाठ्यक्रम, युरोपमा ग्यास्ट्रोनिक प्रतिभा कुख्यात शहरहरू भ्रमण गर्ने उत्तम तरिका हो रेल बाट. यहाँ हाम्रो शीर्ष छन्7सर्वश्रेष्ठ खाद्य यात्रा गर्न अनुभवमा युरोप.
भियना सबै आकर्षण छ, तथापि, यो विशेष गरी हो जब यो स्वाद को लागी आउँछ. यो एक palpable प्रामाणिकता छ र तपाईं एक क्लासिक विनीज कफी घरमा एक यात्रा सुरु गर्नुपर्छ. कफी घर देखि, तपाईं लोकप्रिय Naschmarket आफ्नो बाटो बनाउन सक्छ, पनीर र सिरका समावेश अष्ट्रीया, संरक्षित को एक विस्तृत विविधता संग एक परम्परागत मणि.